Madaxweynihii hore ee Yuhuuda Shimon Peres oo geeriyooday - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldMadaxweynihii hore ee Yuhuuda Shimon Peres oo geeriyooday
September 28, 2016 Abdirahman Abdullahi Sheikh World 0
Madaxweynihii hore ee Yuhuuda, Shimon Peres. Xuquuqda Sawirka: Reuters.
Tel-Aviv-(Puntland Mirror) Madaxweynihii hore ee Yuhuuda ahaana nin ku guulaystay abaalmarinta nabadda, Shimon Peres ayaa geeriyooday maanta oo Arbaco ah, labo asbuuc kadib markii uu ku dhacay xanuunka kadiska ah ee maskaxda ku dhaca oo howlgabka ka dhiga jirka qaarkiis (stroke).
93-sanno jirka, ayaa geeriyooday isaga oo ay ku hareeraysanyihiin xubno qoyskiisa ah, sida ay xaqiijisay warbaahinta Yuhuuda.
Raysulwasaaraha Yuhuuda (Israel) Benjamin Netanyahu ayaa tacsiyayntiisa shakhsiga ah ku cabiray bayaan taasoo uu ku sheegay in Peres uu ahaa ”kii la jeclaa ee qaranka”. Golaha wasiirada Yuhuuda ayaa saakay isugu imaan doona kulan gaar ah oo ay uga arrinsan doonaan geerida ku timid hoggaamiyihii hore.
Madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa ka tacsiyeeyay geerida Peres isagoo ku tilmaamay saaxiib qaali ahaa iyo wadnihii Yuhuuda.
Peres ayaa labo jeer soo noqday RaysulwasaarahaYuhuuda, kadibna waxa uu noqday madaxweynihii sagaalaad ee Yuhuuda.
1994-tii waxa uu ku guulaystay abaalmarinta caalamiga ah ee nabada (Nobel Peace Prize) waxaana kula guulaystay Raysulwasaarihii hore ee Yuhuuda Yitzhak Rabin iyo maaxweynihii hore ee Falastiiniyiinta Yasser Carafaat, isagoo lagu siiyay dowrkii uu ku lahaa wada-xaajoodyadii Oslo, taasoo lagu qorsheeyay Falastiiniyiinta in ay noqdaan dowlad madax-banaan.
September 15, 2016 Maraykanka iyo Yuhuuda oo kala saxiixday heshiis taariikhi ah oo taageero millitari ah oo ay ku baxayso $38 bilyan
July 4, 2016 RW Israel oo tagay dalka Uganda
June 27, 2016 Turkiga iyo Israel oo heshiis gaaray
RW Cumar Cabdirashiid oo kasoo horjeestay go’aankii ay guddiga doorashooyinka dadban ku sheegeen in soo xulida xildhibaanada Hiiraan iyo Shabeelaha dhexe lagu qabto Muqdisho